I-china ifi eqhotyoshelweyo i-lapel pin mveliso kunye nabenzi | UKumkani
Uyilo lweMetri oluNinzi kunye neenkcukacha ezintsonkothileyo
Izikhonkwane ezenziwe ngokwezifiso zenziwe ngesinyithi esingenanto esikhanyayo phantsi kwawo nawuphi na umthombo wokukhanya.
Uyilo oluphakamileyo lwepolishi kwiifelitshi zesuti ezimnyama kunye neebhatyi intle, ngelixa izikhonkwane ezifakwe kumagqabantshintshi ezinee-antique zigqibelele.
Abathengi baya kuyithanda i-enamel yethu ethambileyo okanye ukhetho lwe-cloisonne lokuxuba kunye nokutshatisa imibala kuyilo lwabo, kodwa kuyilo oluyinyani lokwenyani, izikhonkwane ezibethekileyo ziyafa lolona khetho lufanelekileyo.
Izikhonkwane ezifihliweyo sisipho esifanelekileyo senkqubo yokwamkelwa kwabasebenzi, impumelelo yezemfundo, ukuzingca kweqela kunye nezinye izihlandlo.
Iqela lethu lobugcisa linamava obugcisa bokwenza ngesandla okwahlukileyo ukusuka ekuqaleni nokubuyisela ilogo yeqela, isaci kunye nebheji ngokuchaneka ngokugqibeleleyo.
Silelona khetho lilungileyo kuwe ukuba ufuna iseti yokufa okubethelwe izikhonkwane zelapel.
Inkqubo yokwenza izikhonkwane zokufa yinkqubo yemveli, eneneni inyathelo lokuqala ekudaleni iintlobo ezahlukeneyo zezikhonkwane zesiko.
Ngokwenza isikhunta isixhobo esikhethekileyo, ukugcina ukubonakaliswa koyilo lwakho, kwaye uyisebenzise ukunkqonkqoza (okanye ukuyitampu) uyilo lwakho kwisiseko sesinyithi, singenza iindawo zokunyathela ezibukhali nezineenkcukacha, kwaye sifumane izikhonkwane ezikumgangatho ophezulu.
Olona phawu lubalaseleyo lwepini yokugqibela yokubumba yindawo yayo ephakanyisiweyo kunye nemvelaphi ebunjiweyo.
Ukufa kwethu kwabetha izikhonkwane zeLapel zisebenzisa ubhedu okanye isinyithi sesinyithi ngenxa yokuthamba kwayo ukufikelela kwizitampu ezikumgangatho ophezulu. Khetha enye yeendlela zethu ezininzi; igolide, ubhedu nobhedu; kunye nezinye iindlela zokwenza uyilo lwakho luhluke.
Yongeza ilitye lokwenziwa, inombolo ye-serial, okanye naluphi na ukhetho lwethu lokupakisha ukwenza inaliti ebunjiweyo efanelekileyo njengesipho, yamkele impumelelo, okanye ukhumbule isikhumbuzo.
Ngaba ukungunda kulungele uyilo lwam? Izikhonkwane zokufa lolona khetho lufanelekileyo, uyilo alubandakanyi umbala oqaqambileyo okanye imifanekiso eshicilelweyo.
Ezi zikhonkwane zesiko zihlala zinobukeka obuhle, obudala kunye noyilo olukhulu olufuna imigca ecocekileyo, entle.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda unxibelelane nathi okanye u-odole izikhonkwane zesiko kunye nezinye iindlela onokukhetha kuzo!
Uza kugqiba ukuba yeyiphi indlela yesitayile efanelekileyo kuyilo lwakho kunye neqela lethu elinamava.
Gcwalisa ifom yesicelo sokucaphulwa kwemveliso eyenziwe ngokwezifiso kwaye unikezele ngeenkcukacha ezininzi kangangoko kunokwenzeka. Iqela lethu liya kuqhagamshelana nawe kwisithuba sosuku olunye ukuze uxoxe ngokuza kwakho.
Egqithileyo Ukulahla ipini yethayile
Okulandelayo: Impumelelo yeembasa
Izikhonkwane ezi-die ezinamathele